Hase yeeshee, HBS waxay sameysaa? Halkan waa liistada dhammaan xayawaanka lagu diley ciyaarta of Thrones! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » kale Hase yeeshee, HBS waxay sameysaa? Halkan waa liistada dhammaan xayawaanka lagu diley ciyaarta of Thrones!
Hase yeeshee, HBS waxay sameysaa? Halkan waa liistada dhammaan xayawaanka lagu diley ciyaarta of Thrones!
Sannadka siddeedaad iyo kan ugu dambeeya ee Game of Thrones ayaa soo socda iyo iyada, waqtiga, dheelitirka dheelitirka. Sii dammaanad qaadaya, kama hadli doono tayada muuqaalka iyo rajooyinka aadka u sareysa ee ka soo baxa dhammaadka dhamaadka taxanaha. Maya, halkan waxaan ka hadli doonaa xuruufaha kuwaas oo si naxariis leh looga saaray barnaamijka oo badanaaba la ilaaway: xayawaanka barnaamijka HBO! Hadday jilayaasha badani arkeen magacooda ayaa ka baxaya dhibcaha GoT, asxaabteena xayawaanka ayaa sidoo kale waxyeellada ka soo gaartay go'aannada qoraalka ah ee xun dabeecaddan oo uu dilay Cersei oo aanaan ogeyn. Waa waqtigii lagu siin lahaa caddaalad!
Lady, geedka ee Sansa
Xilligii kowaad, Lady, gabadh eey ka tirsan tahay Sansa, waxaa diley Ned Stark. Sababta Walaashiis Nymeria oo qaniinay Joffrey, Cersei waxa uu dalbanayaa in uu ka baxo aabaha Stark. Ka cabsashada nolosha xayawaankiisa, Arya si kastaba ha ahaatee waxay sii haysaa Nymeria, iyada oo laydhka lumay xanuunkii uu ku dalbaday Lannister. Nediga ugu dambeeya ee geesinimada leh, Ned wuxuu soo jeedinayaa inuu dhammeeyo maalmaha xayawaanka halkii uu ka noqon lahaa Ser Ilyn Payne isagoo tixgelinaya in ay u qalantay in ka sii dhimato gacmaha "tuug".
Gray Wind, Robb Stark's Wolf
Gray Wind, dhibanaha Wedding Purple
Dhibbanaha damaanad qaadka ah ee Wedding Red ...Ku dheji qafis inta lagu jiro xasuuqii, Robb saaxiibkiisii ​​aaminka ahaa ma caawin karo sayidkiisa. Haddii qorayaashu ay nagu dayaceen dilkiisa, maalintaa ka dib Wedding Purple, waxaan fahamsanahay in xayawaanka saboolka ah laga jaray, madaxiisa oo lagu qalay meydka Stark.
Summer, guntada of Bran
Summer, waxaa sidoo kale ka maqan Game of Thrones
Sida walaalihiis iyo gabadha, Bran ee dogobka wolf Xagaagu ma noolaan doono muddo dheer si ay u arkaan dhamaadka bandhigga. Xayawaankuna waa dhiman by White Walkers halka uu sayidkiisu ku sugan yahay xaalad ay la socdaan sifooyinka saddexda geesoodka ah.
Viserion, masduulaagii Daenerys
Viserion, masduulaagii jilbaha!
Qaar ayaa ku doodi doona in masduulka Dany uusan dhab ahaan u dhintay, ilaa hadda ma dhihi karno in dhamaadka xiga 7 ee taxanaha, isagu waa arrin. Waxaa diley Boqorka Habeenkii, waa la soo sara kiciyey oo wuxuu bedelay barafka. Hawlgalkeedii ugu horeeyay ee loo yaqaan 'emissary of undead'? Burburinta Dhagaxyada oo laga yaabo inay ka dhigaan White Walkers inay ka taliyaan Westeros.
Lady Whiskers, Boots, faraskii Ser Gregor Clagane ...
Koofiyadu ma aha mid difaac!
Magacyada xayawaankii dhacay Game of Thrones weli wali waa ... waxaana jira weli dhacdooyinka 6 ka hor dhamaadka taxanaha. Waxaan uqalmaynaa kuwa ku hadhay ...
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.melty.fr/game-of-thrones-mais-que-fait-la-spa-voici-la-liste-de-tous-les-animaux-tues-dans-game-of-thrones-a671845.html
Morocco: Ryanair waxay u fidin kartaa marin cusub oo loogu talagalay Morocco oo ka socda Marseille
Pornography: maxay saameyn ku leedahay dhalinyarada? - xnxx